Olwekhilikithi eSweetwaters seluhlomule ngobuchwepheshe – Msunduzi News
IKwaZulu-Natal Inland Cricket Union isidlulisele uhlelo olwaziwa nge ‘School in a Box’ nolusekelwe ngezimali yiCricket South Africa (CSA) kuSweetwaters Cricket Hub. Lolu wuhlelo olusebenzisa amatablets okungamakhompiyutha aqukethe izifundo ezingaphezu kwezi-4000 zesiNgisi, iMathematics, isayensi necomputer coding kusukela ezingeni lePrimary kuze kuyofika eHigh School. Kunanezifundo zabasesezinkulisa ngaphansi kohlelo iFoundational Literacy Course for Foundation Phase learners. Leso naleso sikole esisebhokisini sinetrunk lensimbi eliqukethe okuhambisana nezifundo, i-internet router, iserver neshaja ye-USB bese kuba namatablets aselungiselwe ukuqala umsebenzi aphakathi kwayi-10 kuya kwangama-30.
ISchool in a Box uyakwazi ukusisebenzisa noma ungaxhumekile ku-intanethi futhi asidinge buchwepheshe obungako noma imfundo ephakeme kangako. Lezi zifundo zizoqhutshwa umuntu onolwazi lokuqeqesha kanti zizosekelwa ngezimali yiCSA.
Lolu hlelo lwethulwa ngoLwesine zingama-25 kuNtulikazi wezi-2019 eSweetwaters. Uhlelo luzokwenza isiqiniseko sokuthi abadlali bekhilikithi ababhalise kuHub baqeqeshwe ngokuphelele. Izigaba ezehlukene zeHub zizoba nezinsuku ezehlukene zokwethamela izifundo zokwengeza futhi zithole ukusizakala lapho kubonakala zisenenkinga khona. IKZN Inland Cricket Union ingenye yeziNyunyana ezinhlanu ukuba nalolu hlelo kumaHub eCSA angama-50 eNingizimu Afrika.
UYashveer Singh oyimeneja yezokuqeqesha kuKZN Inland Cricket Union, ekhuluma naboMsunduzi News uthe babonga kakhulu kuCricket South Africa ngalo mnyakazo. Ubeke wathi, “IKwaZulu-Natal Inland Cricket Union ijabule kakhulu ngokuthi iprojekthi enjengalena izokwethulwa kwiHub ebukeka iqhuba kahle kakhulu ezweni.” Uqhube wathi, “Singafisa ukudlulisa ukubonga okungazenzisiyo kuCricket South Africa ngokusebenzisana nezikole ezingaphansi kweHub ukuze kusizakale ngosizo olwengeziwe abafundi. Lokhu kuzokwenza ukuthi imfundo nezemidlalo kuqhubeke ngendlela elinganayo.”
Previous post: AmaZulu ayakhonya eMsunduzi
Next post: Kuhlomule nezingane ngolukaMandela